Tsy maty ny CISPA | Martech Zone
Wednesday, May 1, 2013 Talata, Aprily 30, 2013 Douglas Karr
Isaky ny mahita volavolan-dalàna mandeha mamaky ny loholona sy ny kongresy izay misy antsasaky ny lavitrisa dolara avy amin'ny lobbyista orinasa ao ambadik'izany ianao dia tokony hojerenao tsara izany amin'ny maha olom-pirenena anao. Araka ny voasoratra dia tsy hiaro antsika amin'ny fandrahonana amin'ny cyber ny CISPA, fa kosa hanitsakitsaka ny zonay faha-4 hanitsiana ny fiainantsika manokana.
Mamela ny governemanta hitsikilo anao izany tsy misy antoka.
Mahatonga azy io ho anao tsy afaka mahita akory momba izany aorian'ny zava-misy.
Mahatanteraka izany tsy azo toriana ny orinasa rehefa manao zavatra tsy ara-dalàna amin'ny data-nao.
It mamela ny orinasa hanao fanafihana an-tserasera samy izy sy olona ivelan'ny lalàna.
Izy io dia mahatonga ny politika rehetra momba ny tsiambaratelo ao amin'ny tranonkala ho teboka iray, ary manitsakitsaka ny fanitsiana faha-4.
Fanitsiana fahefatra amin'ny lalàm-panorenan'ny Etazonia
Ny zon'ny vahoaka milamina amin'ny tenany, ny tranony, ny taratasiny ary ny vokany manohitra ny fisavana sy ny fisamborana tsy misy antony, dia tsy ho voahitsakitsaka ary tsy misy Warranty mivoaka, fa amin'ny antony mety, tohanan'ny Oath na fanamafisana, ary mamaritra manokana ny toerana hotadiavina, ary ny olona na zavatra horaisina.
Tohizo azafady mandraisa andraikitra ary tohero ny CISPA.
Tags: Fanitsiana 4cispalalam-panorenanaEFFfanitsiana fahefatrazon'ny fiainana manokana